Imibuzo engama-75 ngoThixo nangeBhayibhile engenakuphendulwa ngo-2022
Kule nqaku, uya kufunda imibuzo malunga nebhayibhile engenakuphendulwa kunye nemibuzo ngoThixo engenakuphendulwa. Ufunde kakuhle!
Lonke uqeqesho, icandelo lokufunda, inkolo, njl. Zonke zinemibuzo engaphendulwanga, ke ukuba ungumKristu kwaye ukuba nemibuzo emininzi malunga nenkolelo yakho akukho nto iphosakeleyo. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nesayensi apho uqhuba khona uvavanyo kunye neempendulo ezifanayo akunakuthethwa ngeenkolelo zonqulo.
Le mibuzo yimibuzo yokomoya kwaye njengomntu onenkolo, kuya kufuneka ulumke kakhulu xa uzama ukuyiphendula.
Akukho luvavanyo lokwenza ukufumana impendulo ngokubhekisele kuko nakuphi na ukubhideka okanye umbuzo onokuba nawo malunga noThixo neBhayibhile. Kuya kufuneka uhambe nencwadi elungileyo ukuze ufumane impendulo kuwo nawuphi na umbuzo okhathaza ingqondo neengcinga zakho.
Zonke iinkolo zinayo le ncwadi ebakhokelayo kwaye ibalawulayo, namaKrestu nawo anazo kwaye yiBhayibhile eNgcwele. Ifana nombhalo-ngqangi wembali onezinto zabantu bamandulo, abaprofeti, uYesu, njalo njalo.
Ikwayincwadi ekhokela amaKristu, ebafundisa ukuba baphile njengabantu abalungileyo, njalo njalo. Le ncwadi, ibhayibhile, inkulu kwaye inemixholo ekunzima ukuyiqonda, kwaye bona-maKrestu-babanga ukuba kufuneka uzaliswe nguMoya oyiNgcwele ukuze ubambe umxholo kunye nentsingiselo yawo.
Ngokwendalo, xa ufunda nayiphi na incwadi yezembali kuqhelekile ukuba nemibuzo emininzi, kwaye ngenxa yokudibana kwebhayibhile nabantu imibuzo ayinakuncedakala. Ubona imibuzo emininzi ngathi "ngubani obhale ibhayibhile?" “Uvela phi uThixo?” kwaye nangokunjalo.
Ngoku, siqokelele uluhlu lwemibuzo malunga noThixo kunye nebhayibhile engenakuphendulwa ukuba ingabenzi ubuKristu bube kukubhidekisa ngakumbi kunokuba sele kunjalo kodwa ukukuveza kwimibuzo ethile malunga nenkolo eshiywe ingaphendulwanga kwaye ukuba ungayifumana indlela. ujikeleze ukuyiphendula.
Ukufunda eli nqaku kuya kukunceda wazi uhlobo lwemibuzo oza kuyibuza umfundisi wakho okanye inkokheli yecawe onolwazi ngakumbi ngokomoya kunaye. Kwaye unokufumana iimpendulo zale mibuzo ekuphazamisileyo ixesha elide, elide ngokubuza abantu abafanelekileyo.
Ngoku, masihle siye kwishishini lethu kwaye sifunde ngale mibuzo ngoThixo nakwibhayibhile engenakuphendulwa.
Imibuzo ngoThixo nangeBhayibhile engenakuphendulwa
Imibuzo engama-30 engeBhayibhile engenakuphendulwa
Imibuzo engama-20 ngoThixo engenakuphendulwa
Le ilandelayo yimibuzo malunga noThixo kunye nebhayibhile engenakuphendulwa;
Ngaba uYesu wayengumntu wasentsomini?
Kutheni kukho abahanahanisi abaninzi kangaka?
Kutheni le nto uThixo osebhayibhelini enenkohliso?
Ngaba zonke iinkonzo azifani?
Njengoko siyalelwe ukuba "siboyise ububi ngokulungileyo", ngaba asinakucinga ngokukhuselekileyo ukuba uThixo uya kwenza okufanayo?
Ngaba kunokuba yinto engenanceba?
Ngaba okusesikweni kukaThixo kunyanzelisa ukwenzakaliswa kwentlungu ekubuya kuyo inceba?
Njengoko kufuneka sithande iintshaba zethu, ngaba asinakucacisa ngokukhuselekileyo ukuba uThixo uyazithanda iintshaba zakhe?
Ukuba umntu wenza ububi ngokubuyisela ububi ngobubi, ngaba uThixo ebengayi kwenza into embi ukuba naye ebeza kwenza okufanayo?
Ukuba uThixo uthanda kuphela abo bamthandayo, ulunge ngantoni na yena kunomoni?
Kutheni le nto uThixo evumela ukubandezeleka, iintlungu, kunye nenkohlakalo yemihla ngemihla?
UNowa wazifaka njani emkhombeni izigidi zeentlobo zezinto eziphilayo?
Uwuchaza njani umhlaba ukuba umhlaba uneminyaka engama-6,000 ukuya kuma-8,000 ubudala kodwa amathambo edayinaso aneminyaka engama-65 yezigidi ubudala. Ngapha koko, amathambo edinosaur afunyenwe kutshanje aqikelelwa kwiminyaka engama-47 yezigidi ubudala.
Xa uYesu wafayo emnqamlezweni wachitha iintsuku ezintathu esihogweni ehlawulela izono zehlabathi, kutheni ke abantu kufuneka baye esihogweni bazibhatale kwakhona emva kokuba siswelekile?
Ngaba idini likaYesu lalingalifanelekanga ukuhlawulela izono zethu nathi ekufuneka silinikele? Ukwenza ukuba sihlawule kabini
Kwimbali yokutshatyalaliswa kweSodom neGomora, kwakutheni ukuze uThixo abulale umfazi kaLote ngokumguqula abe yintsika yetyuwa xa enenceba yonke?
Yintoni injongo yesihogo?
Ukuba isihogo kufanele ukuba silungise izono zethu, kutheni le nto kufuneka sihlale apho ngonaphakade?
Kutheni le nto uThixo wavavanya ukholo luka-Abraham ngokusebenzisa okuphela komntwana wakhe?
Siwava njani amadangatye omlilo esihogo xa sisifa? Ngokobuchwephesha ingqondo ifile xa ukufa kusenzeka kungabikho ndlela yokuba umzimba uthumele amandla ombane ukuba azive.
Ukuba yayinguThixo kwasekuqaleni kwaye wadala zonke izinto, kwakutheni ukuze afune ukudala iingelosi ezazinokuphumelela ukumdelela?
Kunokwenzeka njani ukuba kubekho uqhawulo-mtshato olungaka kwimitshato yamaKristu ukuba lungcwalisiwe nguThixo? "Into ayenzileyo uThixo, makungahlulwa mntu"
Kuba uThixo noYesu bangabantu abafanayo, babelana ngengqondo efanayo, ulwazi, namandla, kwakutheni ukuze uYesu azicenge kumyezo waseGetsemane?
Ibhayibhile ithi kulula ukuba inkamela idlule entunjeni yenaliti kunokuba isityebi singene ezulwini, kutheni ke kukho amaKristu atyebileyo?
Ngokwibhayibhile, indalo kaThixo yayigqibelele, okuthetha ukuba umhlaba yindawo efanelekileyo. Kutheni le nto efuna ukudala enye indawo egqibeleleyo, izulu, kwaye ayisebenzise ukulukuhla ukuba sikholelwe kuye?
Ke, le yimibuzo malunga noThixo kunye nebhayibhile engenakuphendulwa kodwa ukuba ucinga ukuba banokuzikhupha. NjengomKristu kakhulu, ukuba ayingabo bonke, uya kuyiphazamisa inkolelo yakho kodwa imibuzo sele ilapha kwaye akukho mntu ubalekayo kuyo.
Nokuba yeyiphi na indlela enokuhamba ngayo, lo mxholo uyimfundo eyilelwe ukuvula ingqondo yakho kunye nokwandisa ulwazi lwakho lwezibhalo.
Apha, siza kuthetha ngeminye imibuzo malunga nebhayibhile engenakuphendulwa kwaye ungazijonga iimpendulo ngokwakho ngokufunda nzulu izibhalo okanye ngokucela umfundisi okanye inkokeli yecawe yakho ukuba ikuncede.
Akukho ndlela onokuyifunda ngayo ibhayibhile kwaye ungabinayo imibuzo okanye udideke emgceni ngakumbi ukuba usandula ukuphonononga ubuKristu. Kuqhelekile xa ujonga intsimi entsha okanye into enzima njengenkolo, zive ukhululekile ukuzibandakanya kule mibuzo ingezantsi.
Kutheni le nto uThixo onamandla onke kufuneka athumele izibetho kumaJiphutha ngaphambi kokuba avumele amaSirayeli ahambe? Ngewayenze ukuba yenzeke, endaweni yokuba enze bonke abo bantu bahlupheke ngenxa yesigqibo sodwa senkosi yabo, uFaro.
Incwadi elungileyo ithi uThixo uluthando, kutheni le nto isihogo senziwe?
Ukuba uThixo uneminqweno emibini kutheni ukugweba-mbini kugwetywa kwibhayibhile?
Ukuba ingelosi yaba ngumtyholi ngokona, ngaba isono sika-Adam yayisisono santlandlolo?
Ukuba izizathu zomntu "zezokwenyama nezikhohlisayo" njengoko kuchaziwe kwibhayibhile, kwakutheni ukuze uThixo athi "yizani ngoku sixoxe kunye?"
Ukuba uThixo unezinto ezimbini kutheni le nto ibhayibhile isithi "unentliziyo nye"
Ngaba izenzo ezilungileyo zomntu ogqibeleleyo zinokufumana umvuzo ongapheliyo?
Ngaba izenzo ezimbi zomntu ophelileyo zifanelwe sisohlwayo esingenasiphelo?
Kuba iintsana zingenazo iinkolelo nemisebenzi elungileyo, eziyimfuneko kusindiso lwanaphakade, zingasindiswa njani?
Ngaba, hayi uMtyholi nayo yonke imisebenzi yakhe ayizukutshatyalaliswa?
UThixo wadala yonke into ngokwencwadi elungileyo, kwakutheni ukuze enze umthi wolwazi lokulungileyo nokubi awubeke kanye embindini womyezo wase-Eden?
Kutheni le nto inenekazi elidala uThixo awaliphilisayo ngenye iCawe lalidinga isihambisi salo ukuze liphinde lijikele ngeCawa elandelayo?
Yintoni eyenza uEliya noEnoki babaluleke kangaka ukuba baya ezulwini bengakhange bafe?
Sisebenzisa lo mbuzo ungasentla, ibhayibhile icaphula "akukho nyama yomntu iya kububona ubukumkani bamazulu" u-Eliya no-Enoch babenza njani apho?
Kusinceda ngantoni ukuba nenkululeko yokuzikhethela ukuba injongo yeyokuba singayisebenzisi?
Ubonakala njani uYesu?
Kwincwadi kaLuka isahluko 19 ivesi 27, uYesu uthi, “Ke zona ezo ntshaba zam zazingathandanga ukuba ndibe ngukumkani phezu kwazo, ziziseni apha, nizincinithe phambi kwam.” Ngaba oku kuthetha ukuba uYesu ufuna ukuba amaKristu abulale abantu abangakholwayo?
Ukuba uyakholelwa ukuba abantwana abamsulwa emehlweni kaThixo, kuya kulunga ukucebisa ukuba oogqirha abakhupha izisu bazuzela uThixo imiphefumlo.
Kutheni le nto izinto ezimbi zisenziwa egameni likaThixo kunenye into?
Ukuba izulu yindawo engenalo usizi, iintlungu, kunye nokubandezeleka, ungahlala njani wonwabile ezulwini ngolwazi lwabanye abantu oluvutha echibini lomlilo laphakade?
Ekuqaleni kwendalo, baphindaphindeka njani abantu?
Ngaba uThixo wadala abanye abantu ngaphandle kuka-Adam no-Eva?
Ngaba abantu baye baphinda bazalana ngendlela engafunwayo nguThixo?
Kutheni le nto uThixo enganikanga u-Abraham noSara umntwana ngaphambili?
Wafa nini uYosefu, utata kaYesu?
Ngaba uMariya, unina kaYesu wafa?
Ngaba uKrestu, nangayiphi na indlela, ungumsindisi wabangakholwayo?
Ukuba uAdam wadalwa engenakufa, ngaba wayenokufa?
UMoya oyiNgcwele wamenza njani uMariya oyiNtombikazi ukuba akhulelwe?
Nantsi imibuzo malunga nebhayibhile engenakuphendulwa, nangona abanye abefundisi bezenkolo bezamile ukuphendula le mibuzo ngelixa eminye yamkelwe, abanye bengaphendulwanga.
Masibone imibuzo ngoThixo engenakuphendulwa…
Ngaba uThixo ungumntu okhethekileyo?
Ngubani owenza uThixo?
Ngaba uThixo angatshabalalisa ngonaphakade?
Ukuba uThixo uluthando, kutheni ke kukho isihogo?
Kutheni le nto uThixo angabonakalisi nje ubukho bakhe?
Bubuphi ubungqina obukhoyo bokuba uThixo ukho?
Kutheni uThixo evumela ukubandezeleka, iintlungu kunye nezifo?
Kutheni le nto uThixo engaphilisi abo banqunyulwe amalungu omzimba?
Yintoni isini sikaThixo?
Kutheni le nto uThixo engabaxoleli abantu izono zabo emva kokuba beswelekile?
UThixo ufuna ukuba wonke umntu amlandele amnqule, abo bangatshi emlilweni ngonaphakade. UThixo uchaza uhlobo olunjani lwesimo sengqondo?
Usebenzisa lo mbuzo ungasentla, ukuba umntu uziphatha ngale ndlela babizwa ngokuba ngoozwilakhe, kutheni le nto uThixo engabhalwanga njengomntu angoozwilakhe naye?
Kuba uThixo ufuna ukuba wonke umntu amlandele kwaye amnqule, kutheni engadalelanga nje ukuba sibekwe ngoluhlobo?
Kutheni kungekho bungqina bemimangaliso eyenziwa nguThixo?
Ukuba uThixo akangoYise waboni, kutheni aboni befanele ukuthandaza, besithi "Bawo wethu, usixolele iziphoso zethu"
Njengokuba ubulumko bukaThixo bungenakuguqukela kubuyatha, namandla akhe abe bubuthathaka, ngaba ukulunga kwakhe kuya kutshintsha kube yintiyo?
Uvela phi uThixo?
Ngaba uThixo wayenabo abantakwabo, umama okanye utata?
Ukuba kufanelekile ukuba uThixo ohlwaye bonke abantu ngonaphakade, ngaba bekungayi kuba yinto ephosakeleyo ngaye ukuba angakwenzi oko?
Ngaba ngokwenene uYesu nguThixo?
Ngale nto, siligqibile eli nqaku ngemibuzo ngoThixo engenakuphendulwa kunye nemibuzo malunga nebhayibhile engenakuphendulwa. Andazi ukuba ungazifumana phi okanye njani iimpendulo zale mibuzo idweliswe apha kodwa ungafuna ukuqala ngokuthetha nenkokheli yokomoya yecawe yakho.
Sifumana le mibuzo yonke imihla kodwa siyityeshele ngenxa yezizathu ezithile okanye enye inyani kwaye inyani kukuba ayinakuhoywa ngonaphakade, jongana nenyaniso ngokuba "yeyona nto inokukukhulula"
Ubungcali obuphezulu be-12 kwi-Theological Studies eKorea
I-9 Theology Scholarship eCanada yaBafundi beZizwe
imibuzo ngoThixo engenakuphendulwaimibuzo malunga nebhayibhile engenakuphendulwa
Post Previous:Izikolo eziPhakamileyo ze-15 eToronto zaBafundi beZizwe ngezizwe
Okulandelayo Post:I-27 zeYunivesithi zexabiso eliphantsi eMelika zaBafundi beZizwe ngeZizwe
AD Warren uthi:
January 30, 2022 apha 9: 00 pm
Uninzi lwale mibuzo luswele ulwazi nokuqonda.
Zininzi zazo zaphendulwa entloko xa ndizifunda. Kufuneka ngokwenene ufumane umntu owazi kakuhle isibhalo ukuba ashiye imibuzo ekungeyomfuneko ukuba abe kolu luhlu.
Wongeza nje ukubhideka ngakumbi kwabaselula nabangenamava uzama ukufumana iimpendulo.
Eyona mpazamo ndiyibonayo kukungavumi ukuba UYESU KRESTU UNGUTHIXO.
Matshi 21, 2022 kwi-4: 58 pm
USherman Tan uthi:
Novemba 16, 2021 kwi-4: 35
Ukuba oku kubhekiselwa ekubeni uThixo unamalungu ahlukeneyo, impendulo nguewe nohayi. UbuThixo ngumzekelo ogqibeleleyo.
Akukho mntu. Ingxoxo yeCosmological.
Akunjalo, kuba “uThixo unguMoya, ongenasiphelo, ungunaphakade, akaguquguquki kubuntu bakhe, ubulumko, amandla, ubungcwele, okusesikweni, ukulunga, nenyaniso.” Akanakuba ngongenasiphelo, unaphakade, kwaye angaguquki ukuba ebenokuzitshabalalisa ngokwakhe.
Ulilungisa yaye akanakuyeka ububi bungakohlwaywa. Uyasithanda ngokusinika ithuba lokuzikhulula.
Ingqiqo, ukulungiswa kakuhle
Uyasivumela kuba usinike inkululeko yokuzikhethela.
Asinakulindela nantoni na kuYehova esonileyo kuye, esone ngaso; esimphatha njengengcali yendalo yonke endaweni yokuba simdumise, simhlonele yaye simthande.
Ukuba ubuyazi eyona nto uyibuzayo, ubuya kuyiqonda indlela umbuzo wakho oyityumza ngayo intliziyo kaThixo. Ngenxa yokuba umbuzo ufakwe kwingcamango yokuba abantu bafanele babe nenkululeko yokungamhoyi ngokupheleleyo uThixo njengoko bephila, baze baxolelwe ngomgaqo emva kokuba befile. Ngamanye amazwi, sifanele sibe nazo zonke iingenelo zonyana wolahleko kunye netheko elikhulu ekupheleni kosuku, nangona singazange sibuyele ezingqondweni saza samthanda uThixo ebudeni bokuphila kwethu. ( Luka 12 ) Lo mbuzo kukufuna imvume yokuba abantu bangayihoyi imbopheleleko yabo ngoku.
Ufezekile. Ababizwa ngokuba ngoozwilakhe.
Kuba ke bekungayi kuba yinyani.
Ubungqina obuninzi, umgaqo wokuphoxeka, ukuhambelana nokusingqongileyo kwePalestina ngexesha likaYesu, ukuhambelana neSimbo esahlukileyo sikaYesu, kunye nemilinganiselo yeeSemitism.
Ngeli xesha kwakukho indoda eyayisisilumko eyayibizwa ngokuba nguYesu, kwaye ukuziphatha kwayo kwakukuhle, kwaye yayisaziwa njengendoda enesidima. Abantu abaninzi phakathi kwamaYuda nakwezinye iintlanga baba ngabafundi bakhe. UPilato wamgweba ukuba abethelelwe emnqamlezweni aze afe. Kodwa abo baba ngabafundi bakhe abazange bakulahle ukuba ngumfundi wakhe. Banikela ingxelo yokuba wabonakala kubo kwiintsuku ezintathu emva kokubethelelwa kwakhe emnqamlezweni nokuba uyaphila. Ngokuvisisana noko, kusenokwenzeka ukuba wayenguMesiya, abathi abaprofeti banikela ingxelo yemimangaliso. Yaye isizwe samaKristu, esibizwa ngegama lakhe, asikanyamalala ukuza kuthi ga namhlanje.— UJosephus (ongengomKristu)
Aboni *abaguqukayo*. BangamaKristu acela ukuxolelwa.
Bekungayi kuba wrong kodwa uyasithanda.
-Ukuba kukho into endiyiphosileyo okanye ukuba ufuna iinkcukacha ezingaphezulu okanye ingcaciso, phendula nje
Nickol Alejandra Flores Amasifuen uthi:
Meyi 18, 2022 kwi-10: 27 pm
U-ALEXIS MCCOLLUM uthi:
Agasti 27, 2021 kwi-10: 24 am
Kutshanje ndithumele ipodcast ephendula ngokulula uninzi lwazo kwaye ndiza kuthumela iposti yebhlog okanye isiqendu sepodcast kungekudala siphendule yonke into. Enkosi ngoluhlu, ulwenzile lula uphando lwam ngale mibuzo! Nceda undwendwele indawo yam kwaye ufumane iimpendulo zakho, zikhona!